Faallo: Mashaariicda Uu Madaxweyne Siilaanyo U Joogo China, Jidka Laamayga Ah Ee Tagaya Djabouti Lagana Leexinayo Borama Iyo Muranka Suldaannada Awdal | <<<GIRIYAADNEWS<<<<
Faallo: Mashaariicda Uu Madaxweyne Siilaanyo U Joogo China, Jidka Laamayga Ah Ee Tagaya Djabouti Lagana Leexinayo Borama Iyo Muranka Suldaannada Awdal
Posted on Agoosto 15, 2011 by giriyaadnews
(giriyaadnews)Dawladda iyo shacbiga reer Somaliland waxa ay marba marka ka dabaysa u sinqayaan in ay caalamka wax la qabsadaan. Sida muuqatana waxa salka dhigaya nidaamka dawladnimo iyo nidaamka kala danbaynta ee xawliga ku socda. Waxase dhinaco badan ka jira dhalliilo aan qarsoonayn. Kuwaasi oo dhalin kara carqalado aan horey looga sii socon amma hakin kara in la gaadho hadafka loo socdo.
Haddaba qormadeennan ayaan maanta si luxdan ugu lafa guraynaa, arrimaha ku xeeran mashaariicda laga fekerayo in Somaliland ay ka hirgasho iyo muranka macna la’aanta ah ee ay madax dhaqameedyada reer Awdal ku jahawareerinayaan dadkooda, iyo sida aanay uga war hayn mashaariicdaasi iyo waxa ka soo gaadhi kara dalkooda.
An ku bilaabee, waxa in muddo ahba dad muddakar ah ( reer awdal) iga soo gaadhayey su’aalo ku saabsan, mashruuc waddo laamay ah oo ay ku sheegeen in xeebta la marinayo, oo aan la marinayey Borama. Waxa kale oo immiga la hadal hayaa waddo Tareen, oo ay dawladda Itobiya laf dhabar u tahay, sidoo kale waxa iyana muuqata in dalka Shinaha lagala soo hadlayo sidii uu khayraadka dalka ku jira u soo saari lahaa. Oo ay dadku u manaafacaadsan lahaayeen. Taasi ayaana maanta uu Madaxweynaha iyo wafdigiisa China joogaa dhexda u xidheen.
Mashaariicda noocaasi ah iyo kuwo kale oo badaniba waa hawlaha ay dawladda iyo shakhiyaad kaleba u ordayaan had iyo jeer. Dhinca Awdalla, waxa ka socda mashaariic ay dadku wadaan oo aan wax buuran oo mucaawina ah ka helin dawladda Somaliland ammaba beesha caalamka ee ay qaybta ka yihiin, kuwaasi oo ay ka mid yihiin dariiqa laamiga ah ee isku xidha Borama iyo Dilla, oo aad u luudaya. Haseyeeshee qurbajoogga reer Awdal ay mar mar wax u soo tuuraan. Waxa kale oo dhawaan la hadal hayey Mashruuc lagu dhisayo Dekedda Lughaya, oo weli hawshiisii soo socoto. Dhismahaasi oo aanay shacabka reer Awdal cid kale ku tashanayn.
Waxa kale oo dhinaca awdal ka jira, mashaariic yar yar oo ay wadaan NGO yo iska naas nuujin ah oo u badan hanuunin iyo barashada nolosha aasaasiga ah. Markase aad u bar bar dhigto gobollada bariga waxa aad mooddaa in gobolka Awdal uu go’ane ka yahay horumarka ay dawladdu ka samayso gobolladaasi amma hay’adaha UNtu. Taasi markaa waxa ay ku taabsiinaysaa sida aanay gobollada galbeedka cidina ugu maqnayn ceella ugu qodnayn.
Laakiin deeqda alle lagama abaal ka daree, waxa aan la dafiri karin, Jaamacadda Cammuud oo ay ka socoto hawlo ballaadhan, oo isugu jira waxbarasho iyo mashaariic kale oo aqooneed. Sida uu dhawaan warbixinta ku bixiyey Prof. Saleebaan Guuleed oo ah guddoomiyaha Jaamacadduna ay markhaati ka tahay in ay Jaamacaddaasi anfacday dalka Somaliland oo dhan.
Arrimaha dhaqaalaha oo ah udub dhexaadka horumarka iyo nolosha dadka ayaa ah ta tartanka ugu weyni ka socdo, ee ay beelaha Somaliland u kala badinayaan, waxana dadka qaar ka fekerayaan in la is go’doomiyo, si ay u kala badiyaan, taasi ayaana dad badan oo reer awdal ahi u arkaan in dariiqa laamiga ah looga weecinayo magaalooyinka aadka u dhismaya ee u dhexeeya Borama iyo Djabouti. Waxanay ku andacoonayaan in aanay jirin sabab looga weeciyo dariiqa maaddaama aanay jirin cabsi laga qabo in xuduudda u dhaxaysa Somaliland iyo Itoobiya ay wax ka dhacaan.
Arrimahaasi dhaqaalaha Awdal
Waxa ay Borama ka harraaddantahay cashuurta faraha badan ee jaadka iyo ganacsiga kale laga helo, kaasi oo dhaqan laga dhigtay in mar walba la mariyo Wajaale laguna cashuuro Kala-baydh. Laakiin dadka reer Awdal aanay ka fekerin in badeecaddaasi soo marto dhulka ay degaan, xaqna ay u leeyihiin in ay qayb ahaan u soo weeciyaan degmada Awbarre oo ah magaalada ay hoos yimaaddaan maamulka wajaale ee dhinaca Itoobiya. Kaddibna loo soo gudbiyo Borama amma Dilla, oo dabadeed ay degmooyinkaasi cashuur ka helaan. Taasi ugama jeedo in la cuna qabateeyo Kala-baydh, balse waxa aan u arkaa in ay xaqsoor tahay in gobollada iyo degmooyinku wada qabysadaan barwaaqada dalka, shucuubta dhulkaa deggenina ay xaq u leedahay in aan la duudsiyin qaybtooda. Oo xataa haddii ay dawladda Somaliland meel u cayinto ay degmooyinku soo dirsadaan wakiillo, amma la habeeyo nidaam qeexaya in saami isku mid ah loo qoondeeyo degmooyinka jiidahaasi.
Arrintaasi waxa ay meesha ka saaraysaa fikradda ay dadka qaar qabaan, ee odhanaysa gobollada galbeedka mushaharka waxa laga siiyaa Hargeysa, oo iyagu malaha dhaqaale soo gala.
Sidoo kale waxa jira shirkado muuqda amma qarsoon oo aad u gurta khayraadka dabiiciga ah ee ilaah ku mannaystay buuraha gubanka, oo iyagana laga helo malaayiin lacag ah, oo ay dadku ka qatan yihiin. Isla markaana aanay dawladdu cashuur ka qaadin, balse ay warqadda oggolaanshaha uun sannadkiiba mar ka qaaddo lacag fee ah. Haddii si dheelli tiran loo habayn waayo amma shacabka dhulkaa deggen horumarkooda laga fekeri waayana waxa dhici karta in si deg deg ah ay ammaan darro uga dhacdo buuralaydaasi woqooyiga.
Hawsha immiga uu Madaxweyne Siilaanyo u joogo China waa mid aan saxaafadda loo sheegin, oo aan la ogeyn ganacsiga ay meeshaa u tegeen, laakiin waxa jirtay in wasiirka arrimaha dibadda Somaliland uu mar hore tagey dalkaasi, lagana yaabo in uu shirkadaha qaar la soo hesheeyey, balse ma jirto wax arrintaaa laga og yahay.
Haddiise la qiyaaso, waxa aan ognahay in waddanka China uu aad ugu faafayo Afrika iyo waddammada adduunka saddexaad oo uu ka dabacsan yahay dawladaha reer galbeedka ee iyagu daneeya xuquuqda shacabka iyo in aanay shacabyada dhulka wada deggeni is dulmin. Madaxda dawladaha China-na ma kala jecla cidda ay heshiiska la galayaan, cidda la dulmiyayo iyo ammaanka dhulka ka jiraa sida uu yahay. Waxana ay si is miidaamin ah dhaqaalahooda u galiyaan dalal badan oo ka liita Somaliland. Inta badanna waxa ay ku guulaystaan in ay dhaqaale fiican ka sameeyaan. Sidaasi ayaanay kaga badiyeen shirkadaha dawladaha reer galbeedka.
Innaga oo wararka noocaasi oo dhan og ayaa Salaadiinta iyo waxgaradka reer awdal ay u eg yihiin kuwo tiih saaran yahay, inkastoo ay la qabaan salaadiinta gobollada kale, habeennadanna waxa ay ku rafanayaan, wax aanay sagaaro ka biirsan oo ay isku qoor taagayaan, oo midba midka kale u haysto in uu leeyahay ma jirtid. Waxana oday dhaqameedyada looga fadhiyaa in ay si ilbaxnimo ah, oo aan ummadda wax u dhimayn hawlaha u fuliyaan. Taasi ayaanay horumarka dhinacooda kaga aaddan Somaliland wax kaga qaban karaan.
Salaadiinta waxa la gudboon in ay Bulshadooda waayaheega og tahiin, taasi ayaana ka horreysa inta la xod xodanayo madaxda Somaliland ee hawshooda qabsanaysa. Taageerana waxa u ah iyada oo horta laga soo dhalaalo kasbashada ummaddaada. Docfaruurkana la iska ilaaliyo. Wixii midnimo lagu gaadhi waayana tafaraaruq iyo anigu reer hebel ayaan dantooda ilaalinayaa waa laga fiican yahay. Gacmana wada jir ayey wax ku gooyaan.
Siyaasiyiinta ka soo jeedda awdalla weli maaha kuwo ku xidhan ummaddooda, awoodna uma laha in ay si fiican iskugu xidhidhaan shacabka gobollada galbeed iyo dawladda. Waxanay ku rafanayaan in ay oday beeleedyo kala socda midba dhankiisa u raalli geliyaan, oo ay abaabulka beelaha sii xoojiyaan. Waxanan uga digayaa in aanay muddo intaa ka badan sii wadin, haddii kale waxa shacabku u istaagi doonaa in ay runta ka sheegaan ciddii dawladda uga qayb geli lahayd….amma meel sare ha hayo amma meel hoose, madaxweynaha iyo inta ay taladu ka go’daana way dhageysan doonaan.
Impeachment … ayaa iman doona…..???????????
« Serial killer sentenced to death for murdering 11 women Dawlado Afrikaana Oo Diiday In Ay Aqoonsadaan Somaliland »